Compressors na nkwarụ. Kedu ihe ha bụ na ihe ha bụ maka | Akụkọ akụrụngwa
Ndị na - emebi - decomressors. Ihe ha bụ, ihe ha bụ maka na nke faịlụ Compressor ịhọrọ
Ndị ọrụ nwere ahụmịhe ụfọdụ ga-amata nke ọma ihe Compressor bụ na ihe ọ bụ maka, agbanyeghị ọtụtụ ndị bidoro na kọmputa bụ ndị bịara abịa okwu dika unzip, compressed file, decompressor, or compressor.
Taa, anyị ga-ahụ obere nkọwa banyere ihe compressor bụ ihe dị mkpa na ihe ọ bụ maka. N'ụzọ dị otú a mgbe e mesịrị, anyị ga-enwe ike ịhụ onye compressor ịhọrọ maka iji anyị kwa ụbọchị na otu esi etinye ya. Tupu ịga n'ihu, achọrọ m ịkọwapụta nke a site ugbu a gaa n'ihu mgbe a na-ekwu maka a compressor M ga-ezo aka na mmemme nke na-enye ohere ma ịpịkọta ọnụ ma decompress ebe ọ bụ na n'oge a niile mmemme niile na-emechi eme ihe na-abụghị ọrụ nke decompressing.
1 Gịnị bụ a faịlụ Compressor?
2 Gịnị bụ faịlụ compressors maka?
Gịnị bụ a faịlụ Compressor?
Un file Compressor bụ mmemme na-enye gị ohere iwelata (mpikota onu) nha faịlụ. (Ọmụmaatụ, belata nha nke PDF) Nke a na-enweta site na usoro nke algọridim na-ekwe ka data dị na faịlụ ghara ịnwe oke nha na-enweghị ozi ọ bụla. Agaghị m abanye n'ime otu compressor nwere ike isi belata ibu nke faịlụ ebe ọ bụ isiokwu dị mgbagwoju anya nke na-abụghị akụkụ nke isiokwu a, nke a na-eche maka ndị na-amalite ịgbakọ, mana ndị nwere mmasị nwere ike ịgụ karịa site na nyocha na data mkpakọ.
BDị ka m kwuru na mbụ, mgbe anyị na-ekwu maka compressive file anyị ghọtara na ọ gụnyere ike decompress faịlụ ndị abịakọrọ. Ruo nkọwa gara aga, a ga-atụkwasị ya na compressor nwekwara ike iweghachi faịlụ abịakọrọ na usoro nke mbụ ya (decompressing). I nwere ike ịna-eche Ma gịnị ma hapụ faịlụ abịakọrọ ma si otú ahụ weghara obere ohere oge niile?. Ihe bụ nsogbu bụ na mgbe anyị mpikota onu faịlụ ọ na-agbanwe ya format, ya Ọdịdị, na ọ nwere ike na-arụ ọrụ site compressors. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịnwere akwụkwọ ederede na PDF ndọtị na i nwere ike imeghe na usoro ihe omume Foxit Reader Reader na ị mpikota onu ya na a file Compressor na ị gaghị enwe ike imeghe akwụkwọ ruo mgbe ị unzip ya.
ENke ikpeazu na-eme n'ihi na mgbe ị mpikota onu faịlụ a ndọtị ya gbanwere. Ka m kọwaa, dịka ọmụmaatụ na faịlụ a na-akpọ "my_program.exe" ndọtị bụ ".exe»Na mgbe ị na mpikota onu ya ọ ga-agbanwe na-« my_program.zip»Ma ọ bụ« my_programrar»Dabere na mkpakọ usoro ị họrọ. Formatsdị mkpakọ kachasị dị na ya bụ abụọ (zip na rar), mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ dịka: 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CAB, CDI, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, ite, LHA, LIB, LZH, MDF, MBF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, agha, XXE, YZ1, Z na ZOO.
Ọtụtụ compres ga-ekwe gị aka nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a ọ bụ ezie na ọ bụrụ na sistemụ nrụọrụ gị bụ Linux, na ntuziaka a anyị ga-egosi gị otu wunye tar.gz.
Gịnị bụ faịlụ compressors maka?
E wezụga ohere anyị na-azọpụta na diski ike mgbe anyị nwere abịakọrọ faịlụ, isi ihe ịba uru nke faịlụ compressor nwere ekele mgbe ị na-ezipụ faịlụ site na kọmputa ọzọ. Ọ bụrụ na ịnwere izipu faịlụ site na email na mmemme ahụ gwara gị na faịlụ ị ga-eziga buru oke ibu, ị ga-enwe ọ gladụ ịmara nke ahụ na a Compressor ị nwere ike belata faịlụ nha inwe ike iziga ya site na mail. Anyị amataworị na ọ bụrụ na ịkekọrịta faịlụ na netwọkụ, ka ha buru ibu, ogologo oge ọ ga-ewe iji zipu ma ọ bụ budata ha. Yabụ site na ịpịkọta faịlụ anyị ga-enweta, na mgbakwunye na ohere nchekwa, oge izipu na nbudata faịlụ.
BỌ dị mma, anyị amatalarị ihe mpịakọta faịlụ maka na ihe ọ bụ maka, ugbu a ọ bụ oge iji kpebie nke ị ga - ahọrọ. Otu n'ime compres compres - ọtụtụ mgbagha bụ Winzip, nke a na-akwụ ụgwọ, nke kachasị gbasasịa ma jiri mee ihe bụ Winrar, ma a na-akwụkwa ya. N'aka nke ọzọ, compres compress faịlụ na-abawanyewanye ama nke na-enye anyị ohere ịme ihe niile anyị ga-eme otu n'ime ndị akwụ ụgwọ mana free. N'ikwu eziokwu, ọrụ ndị ọrụ nkịtị na-eji bụ zip na unzip na mmemme ndị a n'efu na-arụ ọrụ ndị a karịa ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na mgbakwunye na n'efu ha nọ español ihe opts ghara ikwu penny iji Compressor. Ana m akwado ka ị lee anya abụọ 7-Zip dị ka IZArcHa abụọ bụ n'efu, ha nọ na Spanish ma ị nwere ike ịpịkọta ha ọnụ ma belata ha.
Sm nwere mmasị na wụnye free na nnọọ zuru compressorgụọ nke a IZArc nwụnye ntuziaka, na ya ị ga-ahụ otu esi etinye usoro ihe omume ahụ site na nkwụsị. N’oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ nkuzi ọzọ ka esi enweta isi ọrụ nke mmemme ahụ. Ruo mgbe ahụ, enwere m olileanya na ọ doro gị anya na ihe compressor-decompressor bụ maka na isiokwu ahụ baara gị uru. Vinegary ekele unu niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ndị na - emebi - decomressors. Ihe ha bụ, ihe ha bụ maka na nke faịlụ Compressor ịhọrọ
hello… M na-agafe ebe a n'ihi na achọrọ m ozi gbasara ndọtị nke ịzụrụ yana banyere ndị na - akwado ndị nkwonkwo na m ga - asị na ozi a nyeere m aka n'ezie.
Daalụ nke ukwuu!!
Ugbu a na nyocha nke ọrụ m, m ga-etinye peeji a ma n'ezie onye nkụzi m ga-akwụsị ebe a iji gụọ ya !!;)
Zaghachi ka tamii
Ndewo, ozi na-egosi banyere compressors nyeere m aka nke ukwuu, ọ bụ naanị ihe m na-achọ, ọ dị mma na enwere ndị na-eji ịntanetị enyere ndị ọzọ aka ma ọ bụghị naanị imerụ ha ahụ.
Ekele dịrị m gị nke ukwuu tamii Ọ bụ ihe ọ pleasureụ inwe ike inyere ndị mmadụ aka na obere ajụjụ IT ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eji blog dị ka ntụaka maka ọrụ. Daalụ.
egwú rock dijo
Daalụ maka ozi ahụ enyere gị iwu ka ị rụọ maka ọrụ kọmpụta gara n'ihu dịka Vinagre Asesino magburu onwe gị ibe gị.
Daalụ nke ukwuu rocker. Obi dị m ụtọ na ozi banyere compres nakwa na peeji a masịrị gị. Daalụ.
taa kedu ka m ga - esi mpikota onu thm faịlụ nke di gburugburu ekwenti
Zaghachi Luis Pedro
Luis Pedro gụrụ nke a ntuziaka na faịlụ THM.
nke m si na ihe niile bu ezigbo nna maka ihu ihe omuma a
Ndewo, achọrọ m ozi m chọrọ compressor ebe ọ bụ na oge ọ bụla ha weghara ohere na diski ike m ...
ma ugbu a, m chọrọ ikele Jehova
Gịnị mere ka ibe a dịrị?
ebe o jeere m ozi ọtụtụ na
Ugbu a ka m maara n'ezie ihe compressing bara uru maka
ma ọ bụ wepụ faịlụ ndị ahụ
nke ahụ bụ naanị
Otutu ekele maka data M na-atụ gị edezi niile compres compres na ugbu a
Achọpụtara m na ọ mara mma
Ndewo, AKW COMKWỌ AKW COMKWỌ NA-EME ỌR GO
Amutara m otutu, m ga-achọ iguta obere peeji gị ma hụ ihe ọzọ ị nwere ike inyere m aka.
JIDE KA IJI!!! Ọ D W MMA INY HAVE ND PEOPLE DI KA Gị !! CHUKWU GOZIE GỊ
Zaghachi na FARID
nke a dị nnọọ mma hey kedu ka m ga-esi nweta compressor file ma ọ bụ decompressor nke dị mma na n'efu
Luis nke a bụ n'efu ma dị ezigbo mma, ị nwekwara nkuzi nkuzi nke kọwara etu esi eji ya:
Daalụ nke ukwuu maka ozi ahụ Y .You ma ọ bụrụ na ị maara otú e si enyere ndị mmadụ aka .. goodbye
vanessa agbago dijo
daalụ maka inye aka mee ka o doo m anya banyere ndị na - enye m nsogbu
Zaghachi vanessa abrego
Daalụ maka ịrara onwe gị nye na-ebipụta nkọwa ndị a nke obi abụọ a na-enweta ebe ọ bụ na ozi a bụ ezigbo enyemaka nye anyị.
Ana m akwado ekele uff nke ihe k zọpụta m ekele maka ozi a T_T
Kedu ihe bụ ??? oraleee
hehehe o bughi njakiri ka m wena gbanyu
Ndewo ekele maka ozi a
O nyeere m nnukwu aka n’ihi na aghọtaghị m
ihe ọ bụla haha ​​.. ma m nwere ajụjụ:
You nwere ike mpikota onu music rue
na ekwentị dika nke na-ewe obere? ...
Agustin ndị compressors enweghị ọrụ ahụ. Ihe ị chọrọ ime i nwere na a Ntụgharị (bụghị Compressor) na-enye gị ohere iji belata bitrate gị songs.
kedu ka ọ dị mma ihe m na-achọ, ekele
Zaghachi nye chuyin
Kọwaa ma dị nkenke 🙂
Mana enwere m ajụjụ, m ga-enwe ekele
enyemaka gị: M nwere a Mac na e compressing
faịlị dịka foto na folda egwu
ma achọpụtara m na ha tụrụ otu nha.
Maka gịnị bụ ihe a? Ọ bụ nkịtị?
Onye enwere ike ịgwa m na ha bụ ndị mgbagha biko achọrọ m enyemaka gị
Federico kacha mma dijo
Ahụrụ m ibe a n'anya, hụ ihe niile, ị bụ egbu egbu mmanya kacha mma- M na-akwado gị n'ihe niile. ledo onwe gị anya!
Zaghachi Federico ihe kacha mma
na anto enweghị ike ịbanye signrrrrrrr-
Anto kacha mma dijo
Ana m anwụ anwụ
nke a vinagreeeeeee na-egbu
Zaghachi Anto ihe kacha mma
lichu nwere agba (? dijo
aaaai imaghi mmanya. Emere m ude ma tinye m onwe m ma ghaara ndị ọrụ ibe m ụgha ma m wee sị na m na-adụ sunbathe na ihe m ga-ahụ jijijijijij 🙂
Zaghachi lichu na agba (?
Abụ m caty, amaghị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na camtasia mbipute 6 ma ọ bụrụ na ị nwere ike, ana m ekele gị, daalụ
Ihe omuma ahu jere m ozi.
nadamas k keria ihe atụ nke ọtụtụ compressors na-ekele
Ndewo Gaa, Nke ahụ dị mma na unu nwere peeji a ebe m nwere ike chọọ ihe iji zite foto site na ozi ezinụlọ m nọ na PERU na m nwere nsogbu m na-ezitere gị, n'ihi na m nwere windo ma n'eziokwu m. Agaghị eji ya onye ị na-ekwu ma nwaa ya, enwere m olile anya na m bịakwutere ya ebe m ga-ewere ya ka m nwee ike ịme ihe ziri ezi na nke a ga-eziga, n'ihi na m kwadoro ya na WINZAP, Ọ B NOTGH U ADBORIL NA Nzi. .. Ọ B IFR YOU na Ọ B HAVE Ọ B YOU Ọ B YOU Ọ B COM MENT KWES MER TO KWES TOR TO KWES MER ME M Ekele Gị ... Ekele
Onye garulla mas garulla dijo
O doro gị anya na ị gaghị enweta Win Rar n’efu?
Zaghachi La garulla mas garulla
Nkọwa dị ukwuu, ekele maka nkuzi
Zaghachi ka edgardo
Hey, daalụ nke ukwuu, a masịrị m na ibe ahụ, m ghọtara ozi ahụ ma nyere m aka zuo ike.ekele, ihu akwụkwọ na-agbakwunye na ibe m ma etinye ya na nyocha m dị ka sivergrafia grax, gaa n'ihu ma chọọ gị nke kacha mma
Zaghachi ka eduardo__rap
G ISN IS BIM NKỌTA NT OFTA NTA NJIKỌTA ????
ndewo, nke ahụ bụ ezigbo usoro akwa, ha ga-agụ ya
Zaghachi to yesmary
Ndewo kedu ife bụ ezigbo mmemme site na akwa ha gụrụ site na akwa bụ
Ndewo, mma, ndị dị ka gị !!!!!! dị keria na-ajụ gị otu esi abịanye egwu vidiyo iji chekwaa ha na diski?
Ndewo, mma, ndị dị ka gị !!!!!! M nnọọ chọrọ ịjụ gị otú mpikota onu music videos ịzọpụta ha na a disk? kẹle ekele
Daalụ mmanya, tin n'ebe ahụ ọtụtụ mmadụ dịka ị dị njikere inyere ndị ọzọ aka. Achọtara m ozi niile m chọrọ maka ihe ngosi m n'ụlọ akwụkwọ wee gosipụta peeji a dị ka akwụkwọ kachasị mma. Bay ka Chineke gaa n'ihu na-enye gị amamihe na ọgụgụ isi.
jesy i lalo love dijo
Enwere m ihe niile!
Mụ na enyi m nwoke hụrụ onwe anyị n’anya nke ukwuu ma anyị chọrọ ka mmadụ niile mara ya n’ihi na anyị adịghị ewute igosipụta ịhụnanya anyị ma anyị nwere ọ happyụ nke ukwuu na anyị anọkọrịrị otu afọ na ọkara na anyị chọrọ ịnọkọ ọnụ na ndụ anyị niile. ọ bụ ịhụnanya maka ndụ m ma achọghị m ida ya !!!!
Lalo na Jesy !!!!
Zaghachi jesy i lalo love
Ndewo, dịka mmadụ jụrụla, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na mmadụ maara etu esi etinye mpi faịlụ thm iji tinye ya dị ka isiokwu na ekwentị. Ihe faịlụ ndị a bụ isiokwu m nwere ike ịhọrọ na ekwentị m (sony ericson) wee gbanwee agba na onyonyo dị n’azụ. Enwere m ike iwere faịlụ thm site na ekwentị were ya na pc m, jiri mmemme ọ bụla decompress ya, gbanwee agba na onyonyo, mana m kwesịrị ịpịkọta ya ọzọ iji tinye ya na ekwentị m. Ya mere, onye ọ bụla maara otú mpikota onu a nchekwa ka a thm file?
Zaghachi ka seba64
Enwere m 15 GB na ozi (email) na m kwesịrị ịpịkọta ya iji detuo ya na DVD, ị nwere ihe ọmụma banyere compressor nke nwere ike inyere m aka maka ụdị faịlụ a?
Enwere onye nwere ike inyere m aka maka ihe bụ maka ya?
Ndị ikom ahụ! dijo
Zaghachi Menmụ nwoke!
na-eduga n’ebe ahụ kepin kepan bamos jjjjjjjjj kemando wheel….
Jontxu daddies dijo
otú mmanya si egbu m, ọ na-ewelite kọlestrọl m. Ma ọ bụrụ na mmanya enweghị ihe ọ bụla nke ahụ
Zaghachi Jontxu papitos
chu pagagagaag dijo
Nzaghachi nye chu pa ergagagaag
àmà siri dijo
Ndewo, ihe a nyeere m aka nke ukwuu maka ihe m chọrọ
Garcias jeere m otutu ozi, ekele maka ihe omuma gi na obi oma gi.
Nzaghachi ka cruz hernandez r
Naanị m na-anwa ịpịkọta vidiyo na mgbe usoro ahụ gwụchara, akwụkwọ nta ndị ahụ na-apụta, mana mgbe m meziri ya, vidiyo agbakọtara ọnụ dị ka nke ahụ erughị ala, ọ bụ ya mere? Ma ọ bụ gịnị ka m na-emehie?
ọ Rụ Rico dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị. Ọ dị onye mkpa imere ndị anyị ebere nke chọrọ nkọwa dị mfe, dị mfe nghọta ...
Zaghachi ọ joyụ Rico
PROFE hapụrụ m A Task SBRE FILI Compressres na m na-eche na Peeji a m ga-achọta niile ekele
William ọkachamara dijo
Hey VA, ana m ekele gị na weebụsaịtị gị, ọ zuru oke,
Zaghachi William Wizard
keisi ocha (: dijo
hahaha ee ee trankila ... HAHAJJAJAJAJA blondeaaa redhead
Ọ dị m ka ọ bụ mazooo; P
Zaghachi ka okike (:
Ndewo, ị na-arahụ ụra! 😀
ma ọ bụ; D dijo
ndewo jọrọ njọ!
Zaghachi inesita; D
Enwe; D dijo
Ndewo MR. FUCKER XDD
na xD blonde
Icks Ihi ụra na-ada ụra Ö
Aza zaghachi; D
Ndewo mara mma !!! Kedu nke na-eme!!
hey akulala m jọrọ njọ ……. ; P
Zaghachi rubioaa (:
ịhụnanya bụ obi ọjọọ ... XD
already… gwara m… .. Achọrọ m nke ukwuuyyyy RALLADA¡¡¡¡¡
na nke na-abịa, ọma ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ obi ọjọọ ma ... mgbe ụfọdụ ọ dị mma !!! xDD
ogbenye inesita !! LIMONCETE !!!!! Di D
a machibidoro ịhụnanya gị….
nkem dikwa mgbagwoju anya xdxdxd
na nchegbu gi ???
FRESITAAAAA¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ANA M AHA GI
Ee Ee. mba, mba lemon amachibido !! xDD
na gi peli? gwa anyi ihe banyere ihuru gi n’anya, ya bu, (kedu udi ife?) gbasara Den… .. xDD
MINE KWES butR but KWES butR but mana nke gị ...... ọ bụrụ na "X" achọpụta, ị ga-aga n'ihu na ụzọ ohahahahhaha ... ..
ma tranki gị anaghị m ekwu ihe ọ bụla, mana mgbe ndị mmadụ chọpụtara, ajụla m maka enyemaka ...
anụ ezi m mere ka ị mara:
«K na-egwu ọkụ na njedebe Ọ na-agba ọkụ»
na nooo bu oku !!!!!! xDD
Na-enye m = ¡¡¡
AB ABLASTE NA BRANDON;))
site na Pelired: NOOOOO B D DEN *** LO MIO XD
GN A KA Ọ D !!!! MMA !!!! Agwala m gi .. oburu na ichoro gi .. kwuo ya !! xDD
Orale dude, anam acho ihe omuma banyere ndi compressors ruo ubochi ma odighi onye ghapuru m ojuju, agbanyeghi nke a g’enyere m aka, nwanne di mma ekelee gi ... I bu onye amaka lol !!!
Zaghachi ka ferchito
akatabi okop ye vir dijo
Kedu aha aha dị egwu maka ibe ozi jashahahaha
Zaghachi na cata na vir
Ndewo, ibe gị na-atọ ụtọ ma na-akụzi ihe, ọkachasị na ọ na-akụzi ihe nke ukwuu.Ekelere m gị ma kelee gị maka ozi a. M ga na-eleta peeji gị oge niile
Ndewo, ozi dị na peeji a enyerela m aka nke ukwuu, na ọtụtụ ime ọrụ m na mahadum, ebe ọ bụ na onye nkụzi na-eji zip compressor ọtụtụ ma ugbu a, amaara m ihe ọ bụ na otu esi eji ya na ihe ọ bụ maka na ọtụtụ dị mkpa m ga-enwe ike ibudata ndetu. Moltes Graxies na ntanetị. Adeu
hello gini bu akara ngosi nke ndi compres
mana daalụ: v
Zaghachi ka chuchin
Google nwere atụmatụ ibido laptọọpụ 'Pixel 3' yana Andromeda maka Q3 2017
Google Allo gafere otu nde nbudata na gam akporo